FAYOUMI MASRAXA: SHARAXAAD KU SAABSAN DIGAAGGA EE DIGAAGGA, DAYACTIRKA IYO BEERASHADA, DABEECADAHA IYO ISKU DHAFKA - BEERAHA DIGAAGA
The ugu caan ah ee hore ee adduunka - Fayoumi Masar
Qarniyo badan, dadku waxay kiciyeen noocyo kala duwan oo ah digaagga oo si joogta ah loo horumariyay loona hagaajiyay. Qaar ka mid ah tayada ayaa xoogaystay, halka kuwo kale oo gebi ahaanba la waayay, laakiin waxaa jira jilado gaar ah kuwaas oo ka soo jeeda asalka.
Masraxa Faoumi, oo la mid ah noocyada badan oo aan la mid ahayn mid kale, waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah horjoogayaasha beeraha digaaga ee gudaha.
Fayoumi Masar waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noocyada hore ee digaagga ee meeraha. Qiyaastii 3000 oo sano ka hor, Masaarida qadiimka ah waxay kiciyeen shimbiraha guriga, kuwaas oo ahaa digaag.
Sannado badan, caanahan waxaa laga helay Masar oo kaliya, iyada oo dibadda laga dhoofiyo dalka dibaddiisa ayaa aad u xaddidan.
Kaliya 1940-meeyadii, tani waa markii ugu horreysay ee soo gashay dhulalka Europe. Run ahaantii, ururrada rasmiga ah weli ma doonayaan inay aqoonsadaan Masraxa Masraxa ee Masar si madaxbannaan. Khilaafaadka noocan oo kale ah ayaa yimid sababo la xiriira xaqiiqda ah in laga helo noocaan oo ah qaabkeeda saafiga ah waa mid aad u adag. Beelaha ugu caansan, taas oo ka yimid digaagga Masaarida oo kaliya qaababka shakhsi ahaaneed.
Masruufka Masraxa ee Masar Faoumi
Digaagga noocaan ah waxay u eg yihiin kuwa orodka ah sababtoo ah lugaha dhaadheer iyo booska gaarka ah.
Had iyo jeer wuxuu u taagan yahay sida saxda ah, sida haddii la siiyo xawaare dheeri ah oo shimbir ah inta lagu jiro wadada. Mararka qaar xayawaankan qosolka ah ayaa qabanqaabiya jinsiyada dhabta ah, inta lagu guda jiro kuwaas oo ay u eegaan sida badan duurjoogta. Markaad midabeynayso, waxaa jira fursado kala duwan, laakiin badanaa inta badan waxaad arki kartaa midabada silvery.
Marmarka qaarkood marmarka qaarkood ayaa muuqda oo ah meelo cagaarankaas oo siinaya tani muuqaal qurux badan oo aan caadi ahayn. Isla mar ahaantaana, roosters iyo digaag si buuxda uma kala duwan yihiin muuqaalkooda.
Si kastaba ha noqotee, sida adag ee aad isku dayeyso, suurtagal ma noqon doonto in la go'aamiyo jinsiga ee qaybaha ka hor bilawga xilliga soo-saarka ukunta. Taas awgeed, way adagtahay in la doorto dadka degan midkood mid hoy ah, laakiin xirfad leh, wax walbaa waa suurtagal.
By moodeys, shimbirahan waxaa lagu gartaa dhaqdhaqaaqa iyo dhaqdhaqaaqa, taas oo go'aamisa daryeelkooda. Waxay ka gudbi karaan masaafooyinka wanaagsan ee raadinta cuntada, waxay si fudud u heli karaan meelo bannaan oo loogu talagalay buulada.
Isla mar ahaantaana, waxaa lagu gartaa wadahadal la yaab leh, kuwaa oo isbarbardhigaya wada hadalka labada qof. Laga soo bilaabo toddobaadkii lixaad, digaaggu wuxuu ku farxi karaa heesahiisa, iyo digaagaha qaar ayaa u riyaaqi kara tababarka. Waxay kaloo bilaabaan inay fahmaan sayidkoodii, si sax ah uga jawaabaan su'aalaha qaarkood.
Digaagga Masaarida waxay leeyihiin faa'iidooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda labadaba. Iyo sidoo kale mudnaanta Xeerarka soo socda ayaa ku qoran:
Xiriirinta iyo bulshada.
Dhammaystiran oo dhan.
Awoodda helitaanka cuntada dhammaan xaaladaha.
Miisaanka jidhka wanaagsan.
Awood u leh inay carruurtooda ilaaliyaan.
Kordhinta xayiraadda dhismayaasha.
Cadaadis cuduro badan.
Wax soo saarka ukunta oo liita.
Baahida loo qabo badeecad ballaaran oo loogu talagalay sii kordhaya.
Masaarida Masaarida waxaa lagu kala soocay jacaylka furan iyo dhererka. Shimbiraha si degan waxay u koraan geedaha si ay u helaan aragti fiican. Sida habka tooska ah waxay u muujiyaan hiddo-wadaha hore.
Sidoo kale Wicitaanka awoowe waxaa lagu muujiyay rabitaanka ah in uu raadiyo meel bannaan. Gowradaha noocan oo kale ah waxay si fudud u dooran karaan sanduuq qadiim ah, diyaari yar ama garaash ah oo ay si aad ah ugu dhacaan meel gabaad ah.
Halkaas, digaaggu wuxuu degaa buul oo uu si fudud u kaco. Isla mar ahaantaana, digaag xilligaas oo kale ah ayaa inta badan maamula ukumaha ukunta kale, taas oo inta badan qaadata. Inkasta oo aan lagula talin in si joogta ah loo isticmaalo Masar sida digaag, maadaama ay u dhaqmi karaan si aan la saadaalin karin.
Masaaridu waxay xajisay dareenkii hore ee ka caawiyay inay ku noolaadaan adduunka casriga ah. Sida ugu dhakhsaha badan mid ka mid ah hen ayaa arka aragti ah hanjabaad shimbir shimbir ama bisad, walaaca ayaa isla markiiba kor loo qaaday. Dhamaan dadka deggan cagaarka digaaga ayaa ku dhuumanaya meelo bannaan, taas oo kuu ogolaanaysa inaad badbaadiso shimbiraha dhifta ah ee aan martida ahayn.
Ma waxaad rabtaa inaad daan daan deyn ah ku samayso Loman Brown? Marka hore wax ka barto dhamaan sifooyinkooda!
Digaagga Sumatran waa mid u qalma si ay u bartaan iyaga, inkastoo aysan jirin macluumaad badan oo ku saabsan internetka ... Laakiin ma aha boggayaga!
Xaaladdan oo kale, haddii loo baahdo, Fayoumi si geesinimo leh ayey ugu dagaalamaan dagaalka, ilaalinta dhulkooda iyo carruurtooda. Marka loo eego qof, waxay gebi ahaanba halis u yihiin, laakiin, xaaladaha ba'an, waxay difaaci karaan xuquuqdooda nolosha.
Dhaxalka awoowayaasha reer Masar ee digaagga difaac fiican ayaa helaytaas oo u oggolaanaysa inay iska difaacaan jeermisyo badan.
Sababtoo ah tan, waxaa suurtagal ah in la qaato waqti yar oo wax ka qabashada cudurrada kala duwan, waxaadna sameyn kartaa si toos ah taranta ilma-wareedkan cajiibka ah. Si kastaba ha noqotee, hirgelinta fitamiinada ku jirta cuntadu ma noqon doonto mid aad u macquul ah, maaddaama tani kaliya kordhinayso caabbinta jidhka shimbiraha.
Mawduuca iyo beerista
Fayoumi waxaa badanaa ku kordhay wadamada diiran, maadaama ay ku kala duwan yihiin heerkoodu sarreeyo.
Inkasta oo ay joogaan coop digaag diiran, waxay si fudud u qaadaan carro Ruush. Si kastaba ha noqotee, coop digaagu waa inuu sameeyaa mid aad u sarreeya oo ballaaran, maadaama shimbirahaasi ay caadaysteen xoriyad. Dayactirka xagaaga, furi baqashadda furan ee hawadu waa mid ku habboon, taas oo ay jiri doonto geedo yaryar ama meelo kala duwan oo kala duwan.
Kaliya kore waa in lagu daboolaa shabakad daahir ah ama ugu yaraan faashad.sidaas darteed digaagga ma duulaan. Haddii ay ku faafaan laanta, ha ka welwelin wax badan. Marka ay timaado madow, si fudud ayaad u qaadi kartaa, sababtoo ah ma arki karaan mugdiga.
In cunto, digaagga Masar ma aha mid aad u baahan. Waxay soo saaraan gooryaanka iyo cayayaanka. Cunto noocan oo kale ah, waxay ku hayn karaan muddo gaaban, laakiin waa inaadan ku xad gudbin adkaysiga xayawaankaas. Iyada oo cunto fiican oo dheeli tiran, ay awoodaan inay helaan tiro fiican, gaaraan cabbirka dhexdhexaad ah. Run, tan waxay u baahnaan doonaan qiyaastii 2 sano, iyo cayayaanka hilibka ayaa hela miisaan culus waqti yar.
Fayoumi ma kala duwanaan wax soo saarka ukunta gaarka ah, maaddaama ay soo saaraan 2 ukun oo kaliya toddobaadkii. Waxaa lagu gartaa midab yar iyo midab casaan. Tani waxay bilaabataa jinsi markay tahay da'da 4 bilood ama wax yar ka dib. Xaaladdan oo kale, digaagga waxaa badanaa lagu hayaa illaa 1.5-2 sano, marka ay gaarto ilaa 2 kiilo.
Caadi ahaan, tarankaan waxaa loo jajabiyay maadaama uu yahay hilibka ama ukunta, laakiin sababtoo ah qurxinta quruxda badan iyo taranka cusub ee taranka. Run, waqti badan ayay qaadataa, laakiin natiijooyinka ayaa si fiican u la yaab leh.
Halkeen ka iibsan karaa Ruushka?
Faoumi waa caleemo dhif ah oo laga helaa dhulka Ruushka oo keliya qaabka wakiillada shakhsiga ah. Waxaad ka heli kartaa digaagga sida kaliya ee beeraha shakhsi ah oo si firfircoon ugu hawlan xulashada digaagga.
Tusaale ahaan, waxaad la xiriiri kartaa LLC "Gene pool"oo ku yaal cinwaanka soo socda: Gobolka Moscow, 141300, Sergiev Posad, Masliyev st., 44.
Noocyo badan ayaa soo jeediya inay ku tarmaan sidii analogga ah Faoumi Chickens Belgiankuwaas oo la mid ah cabbirka. Xaaladdan oo kale, digaagga Belgian ayaa barbar dhigaya wax soo saarka ukunta. Si kastaba ha ahaatee, guryahooda qurxinta waa mid aad u liita, sidaas darteed doorashada waa kaliya ee breeder.